ခၠီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢဖိအဂီၢ် ပှၤဆွံတၢ်ဖးသ့အိၣ် ၃၀,၀၀၀
news Khonumthung News, 09 Oct 2018 (3 years ago )
မတူၤပံၤ ဒီးကဲၤပလဲၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပှၤဆွံတၢ်ဖးသ့အိၣ် ၃၀,၀၅၅ ဂၤလၢတၢ်ဃုထၢဖိအဂီၢ်, လၢခၠီကီၢ်စဲၣ်, အဂ့ၢ် ခၠီကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃု ထၢခီမၡ့း စံး၀ဲလီၤ. ခၠီကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢဖိခီမၡ့ၣ် ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူလ့ကၠီၤ စံး ၀ဲ တၢ်ကျးလီၤပှၤဆွံတၢ်ဖးအမံၤစရီ လၢကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ် စုာ် စးထီၣ်လၢလါအီၣ်ထိဘၢၣ် ၁ သီ, ဒီးပတူၤပ့ၤကီၢ်ဆၣ်အ ပူၤ ပှၤ...
news Mizzima News, 16 Dec 2015 (6 years ago )
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲကျဲၤသကိးတၢ်စၢဖှိၣ်ကမံးတံာ်ဘျးစဲ(UPDJC)ကျၢၢ်တံၢ်က့ၤဝဲအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သၢဝီတဝီအံၤခီဖျိလၢတၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤက့ၤဝဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲကျဲၤသကိးတၢ်အတၢ်မၤတကွီၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤက့ၤကရၢဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်အခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ် ဘၣ်ဝဲဖဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲ...
news Irrawaddy News, 18 Jan 2016 (6 years ago )
ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဝဲကၠိသရၣ်မုၣ်လီၢ်လံၤမံၣ်ကၠးလိၣ်ထီဒ်အမ့ၢ်ထၣ်ရၣ်နၣ်သဝီ/ကရူၢ်အခိၣ်ဖဲမုၢ်ဒဲးအနံၤန့ၣ်လီၤ.ခၢၣ် စးပိာ်မုၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤလၢကကဲထီၣ်ဘၣ်ဝဲခိၣ်နၢ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤတၢ်ပၢတၢ်ြပးအတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤအပူၤအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢတညီနုၢ်မၤအသးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လၢတၢ်လုၢ်တၢ်လၢ်အိၣ်ပာ်ဝဲအသိး...
ခၢၣ်စးအဂၤ ၇၀၀ တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢကဟဲထီၣ် ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ
news Xinhau News, 10 Aug 2016 (5 years ago )
ခၢၣ်စး ၇၀၀ ဂၤ လၢအပၣ်ဃုာ်ကရူၢ်လၢအဖီၣ်စုက၀ဲၤခၢၣ်စး ၁၅၀ ဂၤ, တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢကလဲၤထီၣ် ၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်ကလုာ်ဒူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်လၢကဟဲ လၢကီၢ်ပယီၤအဂ့ၢ်, ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအလီၢ်လၤထီတဂၤစံး၀ဲ ဖဲမုၢ်ပျဲၤအနံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢကလဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးလီၤတံၢ်လီၤဆဲး တၢ်ကသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်အီၤဖဲလါတ၀ာ်အဆ...
news Karen News, 22 Apr 2014 (7 years ago )
သဝီဖိလၢမံၣ်ကယ့ၤသဝီ,ဝ့ၢ်ဖါအၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢကထီဒါဝဲဂၢၢ်လာ်ကမူၣ်စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်လၢတၢ်တိာ်ပာ်တ့ထီၣ်အီၤခီဖျိကီၢ်ပယီၤကၠံၣ်ဒီဂၢၢ်လာ်ကမူၣ်ခီပနံာ် (Myanmar Ji Dong Cement Company Limited),ဖဲလၢအဘူးဒီးအဝဲသ့ၣ်သဝီအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢကညီတၢ်ကစီၣ်မၤတၢ်သမံသမိးဒီးစီၤညဲၤဝ့လၢအမ့ၢ်မံၣ်ကယ့ၤသဝီဖိအကတီ...
ဂျပန် GGP မှဆောက်လုပ်ပေးသောတနင်္သာရီဒေသရှိမူလတန်းစာသင်ကျောင်း (၂) ကျောင်း
news The New Light of Myanmar, 26 Feb 2014 (7 years ago )
ဂျပန်အစိုးရသည်အခြေခံလူတန်းစားများလုံခြုံမှုစီမံကိန်း(GGP)စီမံချက်အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားမှုအောက်၌၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနှစ်ခုပေးရန်ခေါင်းစဉ်ပါအစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုစုစုပေါင်းယူအက်စ်ဒေါ်လာ၂၃၁,၁၆၂ထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ “တနင်္သာရီဒေသမြိတ်မြို့နယ်ရှ...
ဂျပန်-မြန်မာပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းတွင် သက်ကြီးရွယ်အို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်မည်
news Eleven Myanmar, 03 Aug 2018 (3 years ago )
ဂျပန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းတွင် သက်ကြီးရွယ်အို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားက စားဝန်ကြီဌာနက သိရသည်။ သင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်က ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြ...
ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ဆု ပေးမည်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိက နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် JACOm Co ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးမြှင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်တက်နေသည့် ကျောင်းသား များအား ပညာသင်ဆု ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသည့် ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ်မှ ထူ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ADB ဘဏ်မှကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ၊ HIV ကာကွယ်တားဆီးခြင်းများအတွက်မြန်မာမှယူအက်စ်ဒေါ်​လာ၂၂မီလီယမ်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိ
news Eleven Newsmedia, 17 Feb 2014 (7 years ago )
ဂျပန်အစိုးရ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသောအုပ်စုများနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောဒေသများတွင်ကျေးလက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေးနှင့်HIV/ IDSကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန်အတွက်မြန်မာအစိုးရနှင့်အာဆီယံဖွံဖြိုးရေးဘဏ်တို့သည်ယူအက်စ်ဒေါ်​လာ​၂၂မီလီယမ်တန်သည့်ထောက်ပံ့ကြေးနှစ်ခုပါသ ဘောတူစာခ...
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်သမားများ စေလွှတ်မည်
news Myanmar Times, 04 Jul 2018 (3 years ago )
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်အကိုင်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာအလုပ် သမားများ စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည့်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်က မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။ ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားသည့် သက်က...